Imeko yentengiso evela esihogweni- iitoni zeenkokeli, kodwa akukho ntengiso | Martech Zone
Nangona ukuba nomthombo ozinzileyo wezikhokelo sele kuyinto entle kulo naliphi na ishishini, ayizukuzisa kutya kwipleyiti. Uyakonwaba ngakumbi xa iintengiso zakho zibuyile zilingana nengxelo yakho encomekayo kaGoogle. Kule meko, ubuncinci bezi zinto zikhokelayo kufuneka ziguqulwe ziye kwintengiso nakubathengi. Kuthekani ukuba ufumana iitoni zokukhokela, kodwa akukho ntengiso? Yintoni ongayenziyo ngokuchanekileyo, kwaye yintoni onokuyenza ukuze intambo yakho yentengiso ibuyele kumkhondo wayo olungileyo?
Ukuba uyadideka kwimeko enjalo, inyathelo lakho lokuqala kufuneka ujonge kwiwebhusayithi yakho kunye nephulo lokuthengisa. Kungenzeka ukuba enye yezi zinto zimbini ayenzi ngokwaneleyo ukuguqula iindwendwe zakho zibe ngabathengi. Ngaba iphulo lakho lilawulwa ngokufanelekileyo? Kuthekani ngewebhusayithi yakho? Makhe sijonge kwezi meko zimbini;
Imeko yoku-1: Iphulo elilawulwa kakubi
Ukufumanisa ukuba ingxaki ingaba ngumkhankaso wakho wokuthengisa, ungaqala ngokuyivavanya ngokupheleleyo. Ukuba uqhuba umkhankaso weNtengiso zikaGoogle, cinga ngokujonga ngamehlo kwingxelo yakho yokukhangela. Awudingi ulwazi lobuchwephesha ukuhlalutya oku. Uyakube ujonge imigaqo kwintengiso yakho esetyenziswa ziindwendwe ukufumana indawo yakho. Ngaba ziyahambelana nale nto uyithengisayo?
Ngokusisiseko, abathengi bacofa kwimigangatho yokukhangela kwintengiso elingana noko bakufunayo. Kule meko, ukuba uthengisa "izikhwama zesikhumba zamanenekazi", sebenzisa amagama okukhangela kunye neenguqu ze-SEO ezikhethekileyo kwimveliso yakho. Ixesha kwintengiso yakho "njengeengxowa zesikhumba" okanye "iingxowa zamanenekazi" libanzi kakhulu kwaye liyalahlekisa ngandlela ithile. Nje ukuba uchonge igama eliphambili lentengiso yakho, yiba nalo kwi-URL yakho yokubonisa kwintengiso nganye, isihloko sephulo nakwinkcazo. Iziphumo zokukhangela ziya kuba nesibindi kumagama aphambili ayenze ibonakale ngakumbi.
Enye into yomkhankaso enokuthi ikhokelele kuguquko olubi luhlobo lwemveliso, umgangatho wokunikezelwa kunye nexabiso olinikayo. Ukuba uza kuqhuba umkhankaso wemveliso okanye inkonzo yakho, ubuncinci yenza uphando lwakho ngokufanelekileyo ukuze wazi iimfuno zabaxumi bakho kunye nokhuphiswano lwakho. Qiniseka ukuba imveliso yakho inendawo eqinileyo oyibonisayo ngokucacileyo kwisithembiso sakho. Kwakhona, ixabiso malibe nokhuphiswano ngokuxhomekeke kwintengiso.
Imeko yesi-2: Indawo yeWebhusayithi engasebenzi kakuhle
Nje ukuba uwugwebe umba wephulo okanye ulungise umba, ityala lakho elilandelayo linokuba yiwebhusayithi. Mhlawumbi iwebhusayithi yakho inomdla ngokwaneleyo. Nangona kunjalo, asebenza njani amaphepha okufika? Kuthekani ngoyilo lwayo, ngaba kuyasebenziseka? Ngamanye amaxesha, kuya kufuneka ucinge njengomthengi kwaye uhlalutye le miba ilandelayo yendawo yakho kwindawo yabo yokujonga.
uyilo -Ukuba ubona ubungqina bezithuthi ezininzi obungakhokeleli kuguquko, mhlawumbi abantu bafika kwiwebhusayithi yakho kwaye bafumane ukothuka kwenkcubeko. Ngokuqinisekileyo baya kuhamba! Zibuze ukuba uyilo lwakho lwewebhu luyahambelana na neendlela ezikhoyo kwishishini lakho. Namhlanje, itekhnoloji ikhula ngokukhawuleza, kwaye abantu baqhele izinto ezinesitayile. Kule meko, ukuba nesiza esixakekileyo esingahambelaniyo neselfowuni kucinyiwe ngokupheleleyo. Vumela uyilo lwakho lunike umbono olungileyo weshishini lakho kwaye abathengi baya kuhlala ixesha elide.
Iinkcukacha zoqhakamshelo -Kubathengi, ubukho beenkcukacha zonxibelelwano ezicacileyo luphawu lokuba iwebhusayithi okanye ishishini liyinyani kwaye lithembekile. Oku kwenza ukuba kubandakanyeke kuyilo lwakho. Qiniseka ukuba umnxeba wakho kunye ne-imeyile oyinikezelayo ziyahoywa. Ngale ndlela, ukuba abathengi banokunxibelelana unokufumana impendulo ngexesha elifanelekileyo. Kuya kufuneka ufake idilesi yendawo yokuhlala yakho.
Ukufika kwamaphepha Eli liphepha lokuqala iindwendwe zakho ziya kufika kwangoko zicofa iintengiso zakho. Kule meko, qiniseka ukuba iyahambelana nayo nayiphi na into oyithengisayo. Ukuba abayifumani into ebebeyilindele, amathuba kukuba baya kushiya iphepha. Umzekelo, ukuba amagama akho aphambili "sisixhobo se-imeyile esizenzekelayo," vumela la magama akhokele kwiphepha elinika iinkcukacha malunga nesi sixhobo. Qiniseka ukuba iphepha lakho lokufika lilayisha ngokulula kwaye linokuhamba kakhulu.
Access -Kulula kangakanani ukuba abathengi bahambe ngamaphepha ahlukeneyo kwiwebhusayithi yakho. Abathengi abaninzi bashiya iphepha ngokukhawuleza ukuba bayabona ukuba bachitha ixesha elininzi befumana into abayifunayo. Kule meko, yila iwebhusayithi yakho ukuze onke amaphepha avule ngokulula. Kwakhona, amaphepha abalulekileyo afana nalawo abonisa iimveliso kunye neenkonzo, malunga neshishini, abafowunelwa kunye njalo njalo kufuneka babonakale kwaye bafikeleleke ngokulula.
Biza wenze -Umnxeba wokuSebenza yindlela yokungena kulo naluphi na unxibelelwano olunokubakho kunye nomntu oza kuba ngumthengi wakho. Oku kwenza ukuba kubalulekile ukwakha ii-CTA ezicacileyo kunye namaqhosha abalulekileyo afanayo. Vumela amakhonkco anikezelweyo akhokelele kwisenzo esilandelayo ofuna ukuba abathengi basenze.
Ukuba ufuna ukuphucula iincoko zakho, lawula igama lakho kwishishini kwi-Intanethi. Kungenxa yokuba abathengi kusenokwenzeka ukuba bafunde uphononongo okanye bathelekise iinkonzo kunye neemveliso zakho nabanye. Ngesi sizathu, soloko unikezela ngeenkonzo ze-stellar kodwa ufumane abathengi bakho ukuba bashiye ingxelo kunye nobungqina nabo. Lonke olu ncedo lwenza ukuba ishishini lakho elikwi-intanethi libonakale linokuthenjwa kwaye liya kuyiphucula i-CTR yakho.
tags: ctrengenayourhwebo inboundmaphephakukhokelelaizikhokelo ezifanelekileyokwiwebhusayithi
UJamil yi-CEO ye Ukuthengisa okuZenzekelayo, iArhente yeeNtengiso zeFanele. Ubungcali bakhe kwezentengiso, ukukhuhla okukhulayo, ukuvelisa okukhokelayo kunye nokuthengisa kunye nokuthengisa okuzenzekelayo kuguqulela kwiindlela ezinengqiqo, ezinokuthabathela intengiso kuphahla! UJamil unamava eminyaka engama-9 + njengenqanaba eliphezulu lokukhokela kwinqanaba lokuthengisa kwinqanaba lehlabathi. Abathengi bakhe kunye namabali abo okuphumelela okukhula babonakalisiwe kwiForbes, BBC, Tech Crunch kunye neVenture Beat.
Ukwenza ubuqu kweNtengiso: Iindlela ezi-4 zokuSebenza esiPhumeleleyo
Ngomhla wama-27 ku-Disemba 2016 ngo-10: 50 AM
Inqaku eligqwesileyo Jamil, mema okuninzi ukuba ucinge ngako.
Imibuliso evela eAlicante, eSpain.
NgoJanuwari 18, 2017 ngo-8:23 PM
Uninzi lwexesha, abathengi bajonga kuqala uphononongo lwenkampani okanye ingxelo yomnye umthengi ngaphambi kokuba baqhubeke nokujonga okanye banomdla wokujonga kumaphepha ahlukeneyo ewebhusayithi yakho. Kubalulekile ukulawula nokuphucula ixesha lomxholo, kunye nenkangeleko kwaye ngakumbi incoko kunye nonxibelelwano lwakho kubaxhasi abafanelekileyo. Amaphulo kunye nezikhokelo aziyi kuthathwa njengemveliso ukuba uthatha amanyathelo, kodwa awunambuyekezo efanelekileyo yokuthengisa, ngoko ke kubalulekile ukulawula kwaye ube nazo zombini.